Madaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu horkacayo oo saaka ku sii jeeda Talyaaniga | Weheliye Online
Madaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu horkacayo oo saaka ku sii jeeda Talyaaniga
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo wafdi balaaran oo uuu hoggaaminayo ayaa saaka lagu wadaa inay u ambabaxaan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga.
Sida ay nooxaqiijeey
ila wareedyo ku dhawdhaw Madaxtooyada Madaxweyne Farmaajo ayaa casuumaad rasmi ah ka helay dowladda Dalkaas, waxaana la filayaa in marka uu tago Rome uu la kulmo madaxda ugu sareysa Talyaaniga iyo jaaliyada Somalida ee ku dhaqan Talyaaniga.
M.Farmaajo ayaa la filayaa inuu madaxda dalka talyaaniga kala hadlo sidii loo xoojin lahaay xiriirka labada dal Dhaqaalaha iyo Amniga Sido waxa uu kala hadli doona sidi Talyaaniga uu gacan kaga geysan lahaayeen qalabeynta ciidanka iyo tababarka Ciidanka Booliska.
Talyaaniga ayaa ka mid ahaay wadamadii gumeystay somalia,hase ahaatee waxa 20 sano ee lasoo dhaafay gaabis ku yimid galaagalka siyaasada ee ku lahaa somalia , kaddib markii dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Turkiga iyo Ingiriiska ay kaga saameyn bateen.
Somalia ayaa u muuqata iney kasoo kabsaneyso dib u dhacii ku yihid burburkii sokeeye ee uu dalka galay waxana muuqata iney gaartay heer keedi dowliga ahaay walow ay wali wax dhiman yihiin
Previous articleMadaxweynihii hore Xasan sheekh oo booqasho ku tagi doona Maamul goboleedyada dalka (Safarka ugu horeeya oo berri ku tagayo Kismaayo)
Next articleMaxkamadda CQS ee Jubbaland oo dil Toogasho Ku fulisay Cabdirisaaq Cumar(Sawiro)